Posted by Tranquillus | Mar 28, 2022 | Shabakada
Wasaaradda shaqada, shaqaalaha iyo isdhexgalka ayaa maanta soo gebagebeysay hindise sharciyeedka horumarinta xirfadaha shaqo iyo shaqaaleysiinta oo ay ka soo qeyb galeen wakiilo ka socday qeybaha hilibka iyo roodhida.
Ujeedooyinka: la kulma baahiyaha shaqaaleysiinta ee qaybahan iyadoo la xoojinayo soo jiidashadahooda.
Laamaha hilibka hilibka ee dhaqanka ah iyo kuwa roodhida dhaqameed-patisserie waxay u taagan yihiin xirfado xudunta u ah gastronomy Faransiiska waxayna abaabulaan xirfado badan. In kasta oo ay firfircoon yihiin, waaxyadani waxa ay wajahayeen dhibaatooyin shaqo qorista dhowr sano.
Si looga jawaabo dhibaatooyinkan ay kordheen dhibaatadu, 2020 dawladdu waxay bilawday mashruuc loogu talagalay "shaqo gaaban" oo qayb ka ah ajandaha bulshada ee lala yeesho shuraakada bulshada.
Ka dib markii la aqoonsaday shaqaaleysiinta iyo baahiyaha xirfadaha, Gobolka iyo wakiillada waaxdu waxay maanta saxeexayaan xeerka horumarinta xirfadaha iyo shaqada si:
Ka qayb qaadashada horumarinta jihaynta dhalinyarada iyo dadka waaweyn ee ku wajahan qaybahan, gaar ahaan iyada oo la fulinayo waxqabadyo wacyi-gelin ah oo la xidhiidha hawl-wadeennada adeegga shaqaalaha dawladda;
Taageerada shirkadaha iyo shaqaalahooda
Shaqooyinka xiisadda: saxeexa jaantusyada horumarinta shaqada iyo xirfadaha qaybaha hilibka - charcuterie farshaxan iyo roodhida - macmacaanka farsamada 29-Maarso, 2022Tranquillus
READ Julaay 24, 2020 Qorshaha soo kabashada dalxiiska: maxaa la qorsheeyay Maaddaama ay tahay meesha ugu horraysa adduunka ee dalxiiska, Faransiisku wuxuu arkayaa dhammaan qaybaha dhaqaalihiisa oo ay si ba’an u saameeyeen cawaaqib xumadii ka dhalatey aafadii Covid-19. Dawladdu waxay diyaarisay "qorshe kicin".
horeNidaamyada tamarta: Ujeedada kaarboonka hooseeya